Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2020 - Wikipedia
Ny bazilika Masindahy Piera dia trano fiangonana lehibe indrindra amin'ny fivavahana katolika. Ao Vatikàna eo amin'ny ilan'ny renirano Tibra, no iorenany, ary ny mitodika manoloana ny Toera-malalaka Masindahy Piera. Atao hoe Basilica Sancti Petri izy amin'ny teny latina fa Basilica di San Pietro in Vaticano kosa amin'ny teny italiana.
Eo amin'ny toerana nahatongavan'ireo mpanao fivahiniana masina voalohany hanao fanompoam-pivavahana amin'i Md Piera no nanorenana azy araka ny sitrapon'i Konstantino I, eo amin'ny toarana nisy ny toeram-pilalaovana naorin'i Kaligola sy i Nerô.
Ny papa Jolio II, avy eo ny mpandimbyazy Leo X, dia nampiasa ny endolzansy (na indolzansa), tamin'ny alalan'i alalan'ilay dominikana alemàna atao hoe Johann Tetzel, mba hamatsiam-bola ny fanamboarana ilay bazilika. Nanameloka izany fivarotana ny endolzasy izany i Martin Lotera ao amin'ireo tsangan-kevitra 95 (31 Oktobra 1517), izay noheveriny fa fanararaotana nataon'ny Eglizy katolika romana sy fanodinana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no niteraka ny reformasiona sy ny protestantisma.
Voasoratra ho isan'ny harena iraisam-pirenena ao amin'ny UNESCO ny bazilika Md Piera, izy no trano vita tamin'ny mari-trano avo lenta sady izy no trano be mpitsidika indrindra maneran-tany. Nanomboka tamin'ny 18 Avrily 1506 ny nanamboarana azy ka tsy nifarana izany raha tsy tamin'ny taona 1626. Isan'ireo mpanao mari-trano nandray anjara tamin'ny fanamboarana ilay bazilika i Donato Bramante sy i Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni sy i Carlo Maderno ary i Gian Lorenzo Bernini.
Na dia tsy voasoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao aza ny nahatongavan'ny apostoly Piera (na Petera) tao Roma amin'ny maha lohan'ny Fiangonana kristiana azy (eveka voalohan'i Antiôka sy Roma, papa voalohany), na ny nahafatesany martira tao, dia manambara ny Katolika, araka ny lovantsofina, fa ao afovoan' io bazilika io no misy ny fasan'i Md Piera.
Mahasarika mpanao fivahiniana masina maro ny bazilika Md Piera izay mahatarika Katolilka miisa any amin'ny 150 000 isan'alahady amin'ny fotoam-pivavahan'ny vavaky ny anjely (angelus) tarihin'ny papa. Izy no trano foangonan'ny papa sy ny Fanjakan'i Vatikàna. (tohiny...)
Amin'ny teny persiana sy siriaka dia atao hoe Māni, amin'ny teny grika Μάνης / Manês, ary amin'ny teny latina 'Manes.' (tohiny...)
Nisahirana ny amin'ireo fanontaniana momba ny fahafatesana sy ny famonjena izay nampiavaka ny kristianisma tamin'ny Andro Antenantenany i Lotera, ka nanovo valinteny avy tao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana. Araka ny hevitr'i Lotera, ny famonjena ny fanahin'ny olombelona dia fanomezana malalaka avy amin' Andriamanitra izay raisina amin'ny alalan'ny fibebahana amin-kitsim-po sy amin'ny finoana marina an'i Jesosy Kristy ho Mesia, tsy misy fanelanelanan'ny Fiangonana. Nihantsy fahefan'ny papa i Lotera amin'ny filazany fa ny Baiboly no hany loharanon'ny fahefana kristiana (tohiny...)
I Roanda na Repoblikan'i Roanda dia firenena ao amin'ny faritra atsinanan'i Afrika, ao amin’ny ivon’ny faritry ny Farihy Lehibe. I Kigali no renivohiny. Manana velarana mirefy 26 338 km² i Roanda. Ireto ny manodidina azy mivatata: i Oganda no ao avarany, i Tanzania sy i Borondy no ao atsimony, ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô sy ny farihy Kivu no ao andrefany, ary i Kenia no ao atsinanany.
Atao hoe Rwanda na Republic of Rwanda izy amin'ny teny anglisy fa Rwanda na Republique de Rwanda koa amin'ny teny frantsay. Atao hoe Repubulika y'u Rwanda izy amin’ny teny kiniaroanda, Republic of Rwanda amin’ny teny anglisy ary Jamhuri ya Rwanda amin’ny teny soahily.
I Roanda no misy mponina makitroka indrindra eran’i Afrika (483 mp/km²) noho ny isan’ny mponiny mahatratra 12 712 431 tamin’ny taona 2020. Tao Roanda no nahitana ady an-trano nahafaty olona an-tapitrisany maro, dia ny Totsy sy ny Hoto. Ankehitriny dia i Roanda no isan’ny firenana azo lazaina fa mandroso indrindra aty Afrika. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2020&oldid=979016"
Voaova farany tamin'ny 1 Janoary 2020 amin'ny 21:19 ity pejy ity.